Muuqaalka Warbaahinta Madaxbannaan ee Waqtiga Isbedelka
Dadweynaha wargelinta ayaa fure u ah inay ku shaqeeyaan dimuqraadiyad shaqeynaya. Waxaa jiri kara helitaanka warbaahin ka badan tan ka hor, hase yeeshee, helitaanku ma aha mid muwaadiniinta u haya si loo ogaado sida ay uqalmayaan oo ay u baahanyihiin.
Warbixintan waxaa wakiil u ahaa Hay'adda McKnight Foundation sababtoo ah dadweynaha Minnesota oo la ogeysiiyay ayaa saldhig u ah maamul-wanaagga dimuqraadiga ah. Shaqada lafteeda waa mid ka mid ah cilmi baaris madax-bannaan.
Iyadoo la tixgelinayo nooca warbaahinta si dhaqso ah loo kobciyo, waa lagama maarmaan in la joojiyo oo la qaato isbedel macro oo saameynaya himilooyinka barnaamijka McKnight.
Qaabka dhaqameed ee wadaagista qiyamka iyo fikradaha ayaa isbedelaya - sida soo dhaweyntii dadka reer Minnesota si ay u dhagaystaan qiimahaas iyada oo loo marayo hab dhaqameed.
Warbixintani waxay soo bandhigeysaa muuqaalka warbaahinta madaxa banaan xilligan isbeddelka. Waxa ay fikradaha muwaadiniinta ee hadda ku xiran tahay warbaahinta-ku kalsoonaanta warbaahinta inay tahay warar been abuur ah, qaar ka mid ah lahaanshaha ayaa isbedelaya cayaaraha warbaahinta madaxa banaan iyo warbaahinta bulshada.